Daniel 4 (Xhosa)
1 UNebhukadenetsareUNebhukadenetsare ukumkani uthi kuzo zonke iintlanga, nezizwe, neelwimi ezimiyo ehlabathini lonke: Malube lukhulu uxolo lwenu.
12 Amagqabi awo abemahle, neziqhamo zawo bezizininzi; ubunokudla okwanele iinto zonke. Amarhamncwa asendle abenomthunzi phantsiphantsi kwawo, iintaka zezulu zahlala emasebeni awo, yadla kuwo yonke inyama.
14 Wadanduluka ngamandla, watsho ukuthi, Wugawuleni lo mthi, niwanqumle amasebe awo, niwaqhawule amagqabi awo, nizichithachithe iziqhamo zawo. Makabaleke emke phantsiphantsi kwawo amarhamncwa, neentaka emasebeni awo.
19 Waza uDaniyeli, ogama linguBheletshatsare, wamangaliswa umzuzwana, nezicamango zakhe zamkhwankqisa. Waphendula ukumkani wathi, Bheletshatsare, iphupha nokutyhilwa kwalo malingakukhathazi. UBheletshatsareUBheletshatsare waphendula wathi, Nkosi yam, iphupha malisingisele kwabakuthiyileyo, nokutyhilwa kwalo kwabakuzondayo.
21 omagqabi ayemahle, oziqhamo bezizininzi, obunokudla okwanele izinto zonke, awahlala phantsiphantsi kwawo amarhamncwa asendle, ezaba neendlu emasebeni awo iintaka zezulu:
28 Konke oko kwamfikela ukumkani uNebhukadenetsareuNebhukadenetsare.
34 Ekupheleni kwemihla, mna, Nebhukadenetsare, ndawaphakamisela ezulwini amehlo am; ukwazi kwam kwabuyela kwakum, ndambonga Osenyangweni, ndamncoma, ndambeka ohleli ngonaphakadengonaphakade, ogunya liligunya elingunaphakade, obukumkani bunezizukulwana ngezizukulwana.